Pope Francis na-agba ndị ntorobịa na-eto eto ume ịmụta ihe n'aka ndị ogbenye | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis na-agba ndị ntorobịa na-eto eto ume ịmụta ihe n'aka ndị ogbenye
di Paolo Tescione - November 22, 2020
N’ozi vidio na Satọde, Pope Francis gbara ndị ntorobịa na-eto eto na ndị ọchụnta ego gburugburu ụwa ume ka ha kpọta Jizọs n’obodo ha ma rụọ ọ bụghị naanị maka ndị ogbenye, kamakwa ndị ogbenye.
N'ịgwa ndị sonyere na mmemme ịntanetị nke Ego nke Francis, Pope kwuru na Nọvemba 21 na ịgbanwe ụwa karịrị "enyemaka mmadụ" ma ọ bụ "ọdịmma": "anyị na-ekwu maka ntughari na mgbanwe nke ihe ndị anyị na-ebute ụzọ na nke ebe ahụ nke ndị ọzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na usoro mmekọrịta anyị. "
“Ya mere, ka anyị ghara iche maka [ndị ogbenye], kama ka anyị na ha. Anyị na-amụta n'aka ha otu esi ewepụta usoro ihe atụ maka elele maka mmadụ niile the.
Ọ gwara ụmụaka toro eto na ezughi oke igbo mkpa ụmụnne ha ndị nwoke na ndị nwanyị. Ọ sịrị, "Anyị ga-eji ahazi anabata na ndị ogbenye nwere ugwu zuru oke ịnọdụ na nzukọ anyị, sonye na mkparịta ụka anyị ma weta achịcha na tebụl ha."
Economy nke Francesco, nke Vatican Dicastery na-akwado maka ọrụ nke mmepe njikọta, bụ ihe omume mebere site na 19 ruo 21 Nọvemba nke ebumnuche zụọ 2.000 ndị ntorobịa na-eto eto na ndị ọchụnta ego si n'akụkụ ụwa niile ka ha "wulite ezigbo ikpe, nwanne, gụnyere ma na-adigide taa na n'ọdịnihu. "
Iji mee nke a, Pope Francis kwuru na ozi vidio ya, “ọ na-ajụ karịa okwu efu: 'ndị ogbenye' na 'ndị ewepụrụ' bụ ezigbo ndị mmadụ. Kama ilele ha anya site n'echiche ma ọ bụ nke ọrụ, oge eruola ịhapụ ha ka ha bụrụ ndị na-akwado ndụ gị na mmekọrịta nke ọha mmadụ n'ozuzu ya. Anyị anaghị eche maka ha, mana anyị na ha “.
N'ịchọpụta atụghị anya ọdịnihu, popu gbara ndị na-eto eto ume ka ha "atụla ụjọ itinye aka na imetụ mkpụrụ obi obodo gị aka site na ele Jizọs anya".
“Atụla egwu iji obi ike tinye esemokwu na n'okporo ụzọ akụkọ ihe mere eme iji jiri mmanụ nke Beatitude tee ha mmanụ”. "Atụla egwu, n'ihi na ọ dịghị onye a na-azọpụta naanị."
Ha kwuru na ha nwere ike ime ọtụtụ ihe n’obodo ha, dọọ ha aka na ntị ka ha ghara ịchọ ụzọ mkpirisi. “Enweghị ụzọ mkpirisi! Bụrụ yist! Bugharịa aka gị! " ọ rụtụrụ aka.
Francis kwuru, sị: "Ozugbo nsogbu ahụ ike dị ugbu a gafere, mmeghachi omume kacha njọ ga-abụ ịdaba ọbụna karị n'ime ahụ ọkụ na-ere ọkụ na ụdị ịchọ ọdịmma onwe onye nanị."
"Cheta", ọ gara n'ihu, "ị nweghị mgbe ị ga-esi na nsogbu a na-enwetaghị: ma ị ga-emesị bụrụ nke ka mma ma ọ bụ ka njọ. Ka anyị kwado ndị ọma, ka anyị were oge a ma were onwe anyị na ọrụ nke ọdịmma. Chukwu kwere ka emechaa, ndi ozo agaghi adi, ma anyi na-ebi ndu nke anyi na ekwu maka “anyi”. Nke ukwu "anyi". Ọ bụghị nke obere "anyị" na nke "ndị ọzọ". Nke ahụ adịghị mma ”.
Na -ehota Saint Pope Paul VI, Francis kwuru na "mmepe enweghị ike ịbelata na mmụba akụ na ụba naanị. Iji bụrụ eziokwu, ọ ga-abụrịrị nke ọma; ọ ga-enwerịrị ihu ọma maka mmepe nke onye ọ bụla na mmadụ niile… Anyị enweghị ike ikwe ka ewepụ akụ na ụba na ọnọdụ mmadụ, ma ọ bụ mmepe site na mmepeanya nke ọ na-eme. Ihe dị anyị mkpa bụ nwoke, nwoke na nwanyị ọbụla, otu mmadụ ọbụla na ụmụ mmadụ niile ”.
Poopu kọwara ọdịnihu dị ka "oge ọ excitingụ na-akpọ anyị ka anyị mata ịdị ngwa na ịma mma nke ịma aka ndị na-echere anyị".
"Oge na-echetara anyị na a naghị ama anyị ikpe maka ụdị akụ na ụba bụ ndị ọdịmma ha ga-ejedebe na ịba uru na nkwalite nke atumatu ọha na eze, na-enweghị mmasị na ụgwọ mmadụ, mmekọrịta mmadụ na gburugburu ya".
Pope Francis: ekwensu bụ onye ụgha
Covid na-akpata enweghị nlaghachi ke Rịọtaara maka curia nke Rome "Pope Francis eziga a akwụkwọ ọ bụla ozi"
Pope Francis siri ike maka ndị na-ajụ ọgwụ mgbochi Covid, iwu maka mmadụ niile